Gbasara Anyị - Ningbo Haishu Judin ịkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
GuzobereNa 2009, Judin Pack Group bụ ọkachamara emepụtara nke iko ihe oriri na igbe a na-ebugharị, dị na Ningbo City, obodo a ma ama na ọdụ ụgbọ mmiri, anyị na-anụ ụtọ njem njem, nke ewetarala anyị ọtụtụ ohere na uru asọmpi n'ahịa mba ụwa. Companylọ ọrụ ahụ enwetala ahụmịhe ọrụ ndị si mba ofesi na ahụmịhe nchịkwa ya, ka ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-eweta oke mkpa.
Professionalbụ ọkachamara n’ichepụta, ịzụlite na imepụta iko na igbe, Judin Pack nwere karịa ndị ọrụ nwere nkà 60, ndị na-azụ ahịa pụrụ iche 5, na ndị ọrụ nchịkwa 10 gụnyere 3 ndị ọrụ nyocha, na ndị ọrụ nkà na ụzụ ndị ọzọ ihe dị ka mmadụ 15 nwere ihe karịrị afọ 10 ahụmahụ ọrụ. na ndị ọrụ nkà na ụzụ 25 nwere ihe karịrị afọ 5 na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. Dabere na ụlọ ọrụ 8,000 square mita, ikike mmepụta anyị ruru ihe karịrị 50 HQ containers kwa ọnwa. Site na nyocha siri ike na ike mmepe yana usoro nchịkọta ngwakọta, anyị na-emeju afọ ndị ahịa anyị n'ụzọ zuru oke site na ngwaahịa na-emeputa ihe ọhụrụ kwa afọ. Dabere na atụmatụ zuru oke, ụdị dịgasị iche, nnukwu mma, ọnụahịa ezi uche dị na ya, ọrụ dị mma na mbupu oge, ngwaahịa anyị na-ere nke ọma na ahịa America, European, na Asia.
Companylọ ọrụ anyị nwere ahụmịja afọ iri na otu na nchịkọta ngwaahịa. Anyị na-enye ngwa ahịa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ama ama ama ama, dịka birgma na Sweden, Carrefour na Spain na France, na Lidl na Germany.
Anyị nwere igwe eji arụ ọrụ kachasị arụ ọrụ yana Heidelberg, nwere ike inye mbipụta flexo, mbipụta mbipụta, yana ihe nkiri ojii PET, ihe eji edo edo na teknụzụ ndị ọzọ. Beenlọ ọrụ anyị agbakwunyerela akwụkwọ maka EUTR, TUV na akwụkwọ FSC. Ngwaahịa arụpụtara n'okpuru nlekọta nke ndị ọrụ nlekọta tozuru oke, ndị nlele na ahụmịhe.
Na-agbaso ụkpụrụ nke " Iguzosi ike n’ezi ihe, ibu ọrụ, Ọrụ n’ọrụ, ihe ọhụrụ", Judin Pack na - elegara anya ugbu a inwekwu nkwado na ndị ahịa niile dabere na uru dị na ibe. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ gaa na ụlọ ọrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.